IiFer ezimbini! Indawo yakho yegadi yesiNgesi!
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguAmoreena
Uluhlu olutsha! Ikhaya leRustic elinobuntu abaninzi kwimizuzu nje embalwa ukusuka kwiFinger Lakes Trail, iTremen & Buttermilk Falls State Parks 'iimbono ezidumileyo zeengxangxasi, iConnecticut Hill State Forest kunye nemizuzu nje eli-15 yokuqhuba ukuya edolophini e-Ithaca, eCornell naseIthaca College! Igumbi lokulala elincinci elinebhedi egcweleyo, igumbi lakho lokuhlala, igumbi lokuhlambela lakho, kunye nekhitshi enkulu / igumbi lokutyela ekwabelwana ngalo. Ukufikelela ngasese kwiveranda egqunyiweyo ejonge kwigadi ebiyelweyo. #BLM #LGBTQSafeSpace. Umamkeli ugonywe ngokupheleleyo!
Igumbi lokulala elincinci (elinomandlalo ogcweleyo weCasper!), Encanyathiselwe kwigumbi lakho lokuhlala. (Umamkeli kufuneka adlule ekoneni yegumbi lokuhlala, kodwa isahluli segumbi esincinci sikhona ukuze sibe ngasese esongezelelekileyo.) Kukwakho noomatrasi womoya olinganayo ofumanekayo onokusetyenziswa kwigumbi lokuhlala. Igumbi lakho lokuhlambela labucala eligcweleyo kunye negumbi lokuhlambela elikhoyo alikho ekhitshini.
Ikhitshi enkulu/igumbi lokutyela kwabelwana ngalo nommkeli.
Kukho ivaranda egqunyiweyo ngqo ngaphandle kwegumbi lakho lokuhlala, eneyadi ebiyelweyo yesilwanyana sakho sasekhaya. Kukho indawo yokutshisa umlilo ngaphandle kwendawo ebiyelweyo kunye neenkuni zasimahla ezifumanekayo kwisiza!
Izilwanyana zasekhaya zamkelekile! $15 umrhumo isilwanyana ngasinye. Nceda undazise kwangaphambili ukuba uza nesilwanyana sasekhaya.
Ndinezinja ezinokuthi zibe kwindawo eziqhelekileyo kunye nam xa ndisekhaya.
Ipropati ayitshaywa ngokupheleleyo.
Indawo yasezilalini kunye nabamelwane kufutshane. Kufuphi kakhulu kwiFinger Lakes Trail, ukukhwela intaba okukhulu, ukukhwela ibhayisekile kunye neendawo zokutyibiliza ezinqumla ilizwe, kunye neePaki ezininzi ezaziwayo zeNYS.
Umbuki zindwendwe ngu- Amoreena
Young-ish professional, just trying to check it all out. She/her
Ndiyafumaneka ukuba ndiyafuneka, kodwa andizukubonwa.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Newfield